Anọghị Philip Kerr. Bernie Gunther nwụrụ nna ya. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Noticias, Black akwụkwọ
Nnọọ akụkọ dị mwute na nke a na-atụghị anya ya maka taa. Onye edemede Scottish Philip kerr Ọ nwụrụ ụnyaahụ site na ọrịa kansa naanị otu ọnwa mgbe ọ nọrọ afọ 62. Ihe okike ya kacha mara amara, onye nyocha Bernie onyekwere na onye nchịkwa Onyedika okeke puku nile puku ndị na-enwe mmasị ya ahapụwo ụmụ mgbei na, n’enweghị obi abụọ ọ bụla, tọgbọrọ chakoo. Site na ebe a, dị ka ndị niile hụrụ ụdị ojii ahụ n'anya, Ọ dị m nwute maka ọnwụ gị ma cheta onye edemede a na nyochaa ọrụ ọma ya. Zuo ike, Maazị Kerr.
1.1 Bernie Gunther usoro
1.2 Usoro Scott Manson
1.3 Akwụkwọ ndị ọzọ
Amụrụ Edinburgh, gụrụ akwụkwọ na Mahadum Birmingham ma nweta Master of Laws na 1980. Ọ rụkwara ọrụ dị ka onye na-edegharị akwụkwọ tupu ọ gbanwee ide na 1989. Ọ bụ nsonazụ nke ihe ịga nke ọma nke Machị violin, aha mbụ nke usoro a kacha mara amara ya, nke onye nyocha Bernie onyekwere, nke e debere na Nazi Germany. Ihe bụ ihe ọzọ, Kerr bipụtara edemede na Umu akwukwo n'okpuru pseudonym nke PB Kerr, dị ka Enigma nke Akhenaten, Blue Djinn nke Babilọn o Eze cobra nke Kathmandu.
Ọzọkwa ụtọ nke egwuregwu na football Karịsịa, ọ malitere a ọhụrụ saga mepụtara na gburugburu ebe a na onye nchịkwa Onyedika okeke dị ka onye protagonist, mana na-ahapụghị ụda ojii.
Bernie Gunther usoro
Onye bụbu onye uwe ojii Kripo na onye nyocha Bernhard Gunther mụrụ na 1989 con Machị violin, nke mere na 1936. ndị Nazi gbalịrị igosi ụwa ihu dị mma n'oge JJ. OO. Ọ bụ akụkụ nke mbụ nke trilogy Berlin noir, nke mekwara Iwu onye omekome y Ihe ndi German.
Gunther bụ ịkwa emo na onye na-atụchasị mmadụ, aka ike ma na-akwụwa aka ọtọ n'ime ụwa ebe ime ihe n'eziokwu, ikpe ziri ezi ma ọ bụ ụmụ mmadụ bụ echiche ndị pụtara ìhè site na enweghị ha. Ọ bụ sagenti na World War I ma merie klas nke abụọ Iron Cross. Nwunye mbụ ya nwụrụ site na ọrịa ahụ wee hapụ ndị uwe ojii na 1933, maka ịghara ịnabata mkpocha Goering ma ọ bụ iso ndị ọchịchị na-ekwurịta okwu.
Anyị ji ya mara ya 38 afọ ma na-arụ ọrụ dị ka onye ọrụ nyocha na otu ọfịs na Alexanderplatz. Ọ raara onwe ya nye ịchọ na-efu efu, a na-egbukarị ndị Juu ma ọ bụ ziga ha n'ogige ịta ahụhụ. Ma na mgbe ahụ ị ga-alaghachikwuru ndị uwe ojii. Mgbe e mesịrị, mgbe Agha Ụwa nke Abụọ nke ọ ga-anọ na Russia ma jide ya, ga-alụgharị di ma kwaga South America.
Akwụkwọ akụkọ niile nwere nnukwu nkọwa nke nkọwa na ntọala ya na ha bụ ezigbo eserese nke oge dị iche iche Gunther na-agabiga.
Iwu onye omekome
Ihe ndi German
Otu maka ọzọ
Ire ọkụ dị omimi
Ọ bụrụ na akpọliteghị ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ Onyinye RBA Black Novel.
Mgbasa ntụ ntụ.
Nwoke iku ume.
Nwanyị ahụ si Zagreb.
N'akụkụ nke ọzọ nke ịgbachi nkịtị.
Blue Prussian, ebipụtaghị ya n’asụsụ Spanish.
Ndị Grik Na-enye Onyinye, ebipụtaghị ya n’asụsụ Spanish.
Usoro Scott Manson
Nịm na football football, protagonist ya bụ Scott Manson, onye nchịkwa nke otu ndị Premier League. Ọ bụ ọkachamara n’egwuregwu bọọlụ na Arsenal. Ọ nọrọ ọnwa 18 na nga maka idina mmadụ n'ike ọ na-emeghị ma n'ebe ahụ ọ mụtara ịlụ ọgụ na ịghara inwe obi ọmịiko dị ukwuu maka ndị uwe ojii. O bi na London ma gbaa alụkwaghịm, mana ya na Louise Considine na-eme mkpa, bụ onye nyocha maka ndị uwe ojii London Metropolitan.
Usoro a na-agbapụta ya ins na out nke nnukwu klọb, ihe ruru unyi nke gbara ya gburugburu na nke di na football, ya na ego ojoo ya, oru ndi n’adighi ama ma obu ihe omuma atu nke ndi n’egwu. Ọ na-anwa anwa ọbụna idina ụdị onwe na ime ụlọ mkpuchi na, n'ozuzu, ya na ndị ahụ niile mmetụta dị ebube nke na-akpali agụụ mmekọahụ maka ịgba bọọlụ. Ọ na-adaberekwa na ezigbo eziokwu na data na ihe niile na-aga site na nchọpụta kpochapụwo nke ihe omume.
Nnyocha ihe ọmụma.
Igwe oku dijitalụ.
Afọ ise atụmatụ.
Mmụọ ozi nke abụọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Noticias » Anọghị Philip Kerr. Bernie Gunther nwụrụ nna ya.